قام مركز الموارد القانونية للمهاجرين (ILRC) بمعلومات لحمايتك من الاحتيال. يمكنك قراءة وتحميل المعلومات باللغة الإنجليزية. သို့မဟုတ် يمكنك قراءة وتحميل المعلومات باللغة الإسبانية. قبل أن تحصل على محام، تأكد من التحدث إلى مدير قضيتك أو شخص موثوق به في مجتمعك.
تأتي المعلومات الموجودة في هذه الصفحة من LawHelp.org နှင့်အခြားယုံကြည်စိတ်ချရသောသတင်းရင်းမြစ်များက. ဒါဟာလမ်းညွှန်မှုများအတွက်ရည်ရွယ်ခြင်းနှင့်တတ်နိုင်သမျှ updated နေပါသည်. USAHello لا تقدم المشورة القانونية، ولا أي من موادنا يقصد أن تؤخذ كمشورة قانونية. သငျသညျအခမဲ့သို့မဟုတ်တန်ဖိုးနည်းရှေ့နေသို့မဟုတ်တရားဝင်အကူအညီများရှာနေလျှင်, ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီပေးနိုင်ပါသည် အခမဲ့နှင့်တန်ဖိုးနည်းဥပဒေရေးရာန်ဆောင်မှုကိုရှာပါ.